प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नै टेर्दैनन् सहकारी
उपभाेक्ता बैंक/बीमा समाचार
सम्झना घिमिरे काठमाडौं, २३ माघ
विगत २ वर्षदेखि उनलाई हरेक दिन सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि देख्न सकिन्छ । उनी आउँछन्, घरि प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवसँग त घरि बाहिर ढोकामा बसेर कसैलाई कुरिरहेका हुन्छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, हेलो सरकार, सहकारी विभाग र नगरपालिका धाउने उनको दिनचर्या नै बनेको छ । उनी हुन्, रवि क्षेत्री । क्षेत्री विगत ७ वर्षदेखि न्यायका लागि यी यावत् स्थानहरूमा हारगुहार गर्दै हिँडिरहेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका– ७ महाराजगञ्ज बस्दै आएका क्षेत्री कामको सिलसिलामा कोलकत्ता आउजाउ गरिरहन्छन् । यसरी पछिल्लो ७ वर्षदेखि काम गर्न कोलकत्ता र न्याय खोज्न काठमाडौंका विभिन्न कार्यालय धाइरहेका छन् उनी ।
आखिर किन धाइरहेका छन् क्षेत्री प्रधानमन्त्री कार्यालय ?
२०६९ सालमा बुबा दिलीपबहादुर क्षेत्रीको मृत्यु भएपछि बाबुको नाममा नागार्जुन नगरपालिका स्युचाटार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा निक्षेप हकदाबी गर्न पुगे उनी । बाबुले सहकारीमा खाता खोल्दा पनि सँगै रहेका बाबुले हकवालाको नाममा रवि क्षेत्री नै लेखेको सम्झना छ उनलाई ।
तर, बुबाको मृत्युपछि एकाएक बुबाकी अर्की श्रीमती बनाएर भारतीय नागरिक रमा क्षेत्रीलाई बुबाको निक्षेप बराबरको ३ लाख रुपैयाँ रकम सहकारीले हकवाला आफूलाई सूचित नै नगरी दिएको उनको आरोप छ । रकम त थोरै थियो तर त्यही थोरै रकम पाउनका लागि खेप्नुपरेको सास्ती भने ठूलै छ, रविसँग ।
सहकारी ऐन, २०७४ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ को दफा १२२ को उपदफा ‘ढ’मा ‘सहकारी संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेखिएको कुरा कुनै कुरा हटाई या उडाई अर्को अर्थ दिने बनाइएमा स्वतः कसुर ठहरिनेछ’ भनेर लेखिएको छ ।
तर, मृतक दिलीप क्षेत्रीले खाता खोल्दा पेस गरेको कागजमा भने हकवाला रवि क्षेत्रीको नाम काटेर रमा क्षेत्री लेखिएको छ । सोहीअनुरूप नक्कली श्रीमती बनाएर सहकारीले पैसा अरूलाई नै भुक्तान गरेको रविको आरोप छ ।
रवि स्युचाटार सहकारीबाट आफूले पाउने निक्षेप नपाएको गुनासो लिएर सहकारी विभाग र नगरपालिका दुवै स्थानमा पुगे । विभागमा उजुरी गरेपश्चात् विभागले पटक पटक सहकारीलाई स्पष्टीकरणका लागि बोलाएको पत्र पनि छ उनीसँग । तर, न त स्पष्टीकरण दिन उक्त सहकारी विभागमा आयो, न त विभागले नै पुनः स्पष्टीकरणका लागि ताकेता नै गर्‍यो ।
यसरी विभाग हुँदै उनी नागार्जुन नगरपालिकासमेत पुगे । नगरपालिकाबाट पनि न्याय नपाएपछि उनी हेलो सरकार हुँदै पटक पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगे । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि उही काम भयो अर्थात् सहकारीलाई प्रष्टीकरण मागियो तर सहकारीले त्यसलाई वास्तै गरेन ।
यसरी नियामक निकायले पटक पटक स्पष्टीकरणका लागि उपस्थित हुन निर्देशन नै जारी गर्दासमेत अटेरी गर्दै आएको स्युचाटार सहकारी संस्थालाई कारबाही गर्न भने कसैले सकेको छैन ।
बरु उल्टै पटक पटक सहकारीका अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिलाई भेट्न जाँदा धम्की पाउनुपरेको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘म विभाग र नगरपालिका जाँदा पटक पटक स्युचाटार सहकारीका सञ्चालकले फोन गरेरै धम्की दिए । जहाँ गए पनि पाउँदैनस् तेरो पैसा भनेर जवाफ दिने गर्थे ।’
सहकारी भने हकदाबी गर्न आउने दिलीप क्षेत्रीकी कान्छी श्रीमती भनिएकी रमा क्षेत्रीले आवश्यक कागजातसहित हकदाबी गरेर पैसा लगिसकेको बताउँदै आएको छ । तर, हकदाबी गर्ने रमा क्षेत्री भने भारतीय नागरिक हुन् । उनको परिचयपत्रमा उनका श्रीमान कृष्ण क्षेत्री उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी श्रीमान् हुँदाहुँदै मृतक दिलीप क्षेत्रीकी श्रीमती भएको र आफूले पाउनुपर्ने निक्षेप बराबरको रकम सहकारीले रमा क्षेत्रीलाई दिएको रविको भनाइ छ ।
‘म दिलीपको सन्तान भएको प्रमाणपत्र तथा बाबुले खाता खोल्दा हकवाला मेरो नाममा भएको प्रमाणपत्र बोकेर यत्रो समयसम्म धाइरहँदा निक्षेप नपाउने अनि कोही महिला म हकवाला हुँ भनेर एउटा वडाको सिफारिस मात्र बोकेर आउँदा पैसा दिने ? यो कहाँसम्मको न्याय हो ?’, उनी भन्छन्, ‘सहकारीले दिनदहाडै मलाई ठग्दा उजुरी कहाँ दिने मैले ? नागार्जुन नगरपालिकादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्दा पनि किन न्याय नपाउने ?’
सहकारीसँग, नियामक निकाय नगरपालिका, विभाग र प्रधानमन्त्री कार्यलयसँग उनी निकै रुष्ट छन् । ७ वर्ष न्यायका लागि भौँतारिइरहेका उनी अचेल भने पैसा नपाउँदा भन्दा सहकारीको गलत काम देख्दादेख्दै कानमा तेल हालेर बस्ने नियामक निकायको शैली देखेर बढी आक्रोशित छन् ।
‘सम्पूर्ण कागजात र प्रमाण हुँदाहुँदै पनि न्याय नपाइने विडम्बना कहिलेसम्म ?’, उनी प्रश्न गर्छन् ।
उनी सहकारीबाट ठगिएका एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यसरी ठगिने मुलुकभर कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्कसमेत छैन नियामक निकायसँग ।
त्यसो त निक्षेप मात्रै कुम्ल्याउने होइन, सर्वसाधारणलाई महँगो ब्याजदरमा ऋण प्रवाहसमेत गर्दै आएका छन् सहकारी संस्थाहरूले । अहिले सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत तोकिएको छ तर नियामक निकाय सहकारी महासंघकै अध्यक्ष मीनराज कँडेल भने विभिन्न सहकारीले नियमविपरीत २० देखि २५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिने गरेको स्वीकार्छन् ।
यसरी महँगो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह, नियमविपरीत कर्जा विस्तार तथा निक्षेपमा ठगी हुँदाहुँदै पनि सहकारीमा कडाइ नगरेको सरोकारवाला र पीडितहरूको गुनासो छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, २३ माघ २०७६, ०७:२०:००
तरलता बढेसँगै कर्जा प्रवाहमा आक्रामक बने बैंकहरू, कुन बैंककाे ब्याजदर सस्तो ?
सय रुपैयाँले बनेका करोडपति